ShweMinThar: လေ့ကျင့်ခန်းအပြီး နာကျင်မှုကို ဘယ်လိုအမြန်ပျောက်စေမလဲ ???
လေ့ကျင့်ခန်းအပြီး နာကျင်မှုကို ဘယ်လိုအမြန်ပျောက်စေမလဲ ???
(How to recover faster and stronger)
စသဖြင့် Gym မှာကစားတဲ့ အခါ ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ မိနစ်လေးဆယ်၊ တစ်နာရီ အချိန်တိုအတွင်းမှာ အားထည့်ရမယ်လို့ ဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ Limit အထိ တွန်းပို့ခြင်းဟာပဲ စိန်ခေါ်မှုအသစ်ကို ဒါဏ်ခံနိုင်မယ့် ကြွက်သားအသစ်တွေ တိုးစေတယ်လို့ နားလည်ထားကြတယ် မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ "No pain, No gain" ကနေ "Too much pain and No gain" ဖြစ်သွားတတ်တာလဲ ခဏခဏပါပဲ။ လှုပ်လေ မြှုပ်လေ၊ ပြင်းထန်အောင်လုပ်လေ နာကျင်လွန်းလို့ Gym ကနေ ရက်ကြာကြာနားရလေ ဖြစ်ဖြစ်သွားပြီး ကြွက်သားအသစ်တက်ဖို့နေနေသာသာ ဒါဏ်ဖြစ်သွားကြတာလဲ မဆန်းတော့။
အလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလေးလွတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အပြီးမှာ အိပ်ထမတင်လုပ်ဆိုလဲ ဗိုက်သားတွေ သုံးလေးရက်ထိနာတာ၊ ပေါင်ဆိုရင်လဲ ပေါင်သားတွေ သုံးလေးရက် ဒါမှမဟုတ် တစ်ချို့ဆို တစ်ပတ် ဆယ်ရက် နာတတ်တာ ကြုံဖူးပါသလား။ တစ်ခါတစ်လေကျ Recover ပြန်သက်သာတာ မြန်တက်သလို၊ တစ်ခါတစ်လေကျ ရက်ကြာတက်တာ ဘာ့ကြောင့်မှန်းမသိဘူး၊ ဘယ်လိုလုပ်ရင် နာကျင်တာ အမြန်ပျောက်မလဲဆိုတာ မသိဘူး စသဖြင့်ေ၀၀ါးနေရင် ဒီဆောင်းပါးဟာ သင့်အတွက် အဖြေပဲဖြစ်မည်။
၁။ စိန်ခေါ်ပါ၊ ဒါပေမယ့် မဖျက်စီးပါနဲ့
" နောက်ဆုံး တစ်ခေါက်၊ ဒါနောက်ဆုံးပဲ။ ချထား "
နောက်ဆုံး လုံးဝမရနိုင်တော့တဲ့ တစ်ခေါက်မှာ မာန်ထည့်ပြီး ကြွက်သားတွေ ပြတ်သွားတဲ့အထိ တွန်းတင်လိုက်မှ အကျိုးရှိမယ်ထင်ပါသလား။ Limit အထိ တိုးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါဆိုပေမယ့် Limit ဆိုတာ ဘယ်လောက်လဲ။ ဘယ်နကြိမ်ထိ Limit ကို တိုးရမလဲ။ Limit ကိုတိုးပါဆိုတဲ့စကားဟာ အမှားမဟုတ်ပေမယ့် လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကို အတိအကျ ပြောလို့မရပါဘူး။ တိုးတာလဲ တိုးပေါ့၊ ဒါပေမယ့် စိန်ခေါ်ပါ၊ မဖျက်စီးပါနဲ့ ဆိုတာကိုတော့ မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။
အလေးမတဲ့ အခါမှာ ကြွက်သားအမျှင်လေးတွေ သေးသေးလေးတွေက အစပြတ်တောက်မယ်၊ ဒါတွေကို နားချိန်မှာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ပါမှ ပိုမိုကြီးထွားလာမယ် မဟုတ်လား။ Limit ကိုတိုးတာလွန်ပြီး စိန်ခေါ်တဲ့ အဆင့်ကို ကျော်သွားပြီး ပျက်စီးတဲ့ အဆင့်ကိုရောက်သွားမယ်၊ ရောက်သွားတဲ့ အခါမှာလဲ သက်သာတဲ့ အချိန်ထိမနားပဲ (ဥပမာ ၃ရက်နားဖို့လိုတဲ့အခါမျိုးမှာ ၂ရက်ပဲနားမယ်) လေ့ကျင့်ခန်းထပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ ဒါဏ်သေးသေးလေးတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကြီးလာပြီး ကြွက်သားတက်လာမယ့် အလုပ်ကိုလုပ်မယ့်အစား ခန္ဓာကိုယ်က ဒါဏ်ရာတွေနဲ့ လည်နေတာနဲ့တင် အကျိုးမရှိဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။
ဒါဆို စိန်ခေါ်ရုံ စိန်ခေါ်ပြီး ဖျက်စီးတဲ့ အဆင့်မရောက်အောင် ဘယ်လိုထိန်းမလဲ???
Limit ကို အခေါက်တိုင်းမှာ မတိုးပါနဲ့။ အောက်မှာ ဥပမာ ပေးလိုက်ပါမယ်။
ပထမအခေါက် - ၁၀ ကြိမ် အလေးပေါ့ပေါ့ပါးပါး
ဒုတိယအခေါက် - ၁၂ ကြိမ် ခပ်လွယ်လွယ် (၁၅ကြိမ်လောက်လုပ်နိုင်တဲ့ အလေး)
တတိယအခေါက်- ၁၂ ကြိမ် (၁၁ကြိမ်လောက်မှာ လေးပြီး ၁၂ကြိမ်ကို အားထုတ်ရတဲ့ အလေးပမာဏ)
လေးခေါက်မြောက် - ၁၀ ကြိမ် (၇ကြိမ်လောက်မှာ တော်တော်လေးလာပြီး ၁၀ကြိမ်ပြည့်အောင် မနည်းလုပ်ရတဲ့ အလေးပမာဏ)
ငါးခေါက်မြောက် - ၁၀ ကြိမ် (၇ကြိမ်လောက်မှာ တော်တော်လေးလာပြီး ၁၀ကြိမ်ပြည့်အောင် မနည်းလုပ်ရတဲ့ အလေးပမာဏ)
ဒါဟာ ဥပမာ အနေအထားပါ။ အတိအကျမဟုတ်ပါဘူး။ သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် အပေါ်က ဥပမာမှာ ယူရမယ့် အနှစ်သာရက
-တတိယအခေါက်မှာ ၁၂ ကြိမ်မြောက် အချက်က Limit ကို တိုးတဲ့ အချက် (၁ကြိမ်)
-လေးခေါက်မြောက်မှာ ၈၊၉၊၁၀ ကြိမ်မြောက် ၃ချက်က Limit ကို တိုးတဲ့ အချက် (၃ကြိမ်)
-ငါးခေါက်မြောက်ကလဲ လေးခေါက်မြောက်နဲ့တူတူ (၃ကြိမ်)
စသဖြင့်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ စုစုပေါင်း ပထမကနေ ငါးခေါက်မြောက်ထိ ပြန်ကြော့တဲ့အခါမှာ Limit ကို သွေးတိုးစမ်းတာ စုစုပေါင်း ၇ကြိမ်လောက်ပဲ ရှိပြီး အခေါက် အခေါက်တိုင်းမှာ "အီး ။။ အဲ ။။" ညှစ်ပြီး အတင်းမရတာ အများကြီးမပါပါဘူး။ ဒီလို နည်းလမ်းက ကြွက်သားကို စိန်ခေါ်ရုံ စိန်ခေါ်စေပြီး ဖျက်စီးတဲ့ အဖြစ်ကနေ ရှောင်လွှဲပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါက အလေးဆော့တဲ့ လူတွေအတွက်နမူနာပါ။ ဒီဥပမာကို ပြေးတာ၊ ရေကူးတာ၊ ကြိုးခုန်တာ၊ Page က Video တွေအတိုင်းလုပ်တာ စတာတွေမှာလဲ သုံးနိုင်ပါတယ်။ မိနစ် ၂၀ဆော့မယ်ဆို မိနစ်၂၀လုံး မိုင်ကုန်မစပဲ ပထမ ၈မိနစ်လောက်မှာ Limit ကို သွေးတိုးစမ်းလိုက်၊ ပြန်လျှော့လိုက် လုပ်ပြီး နောက် ၁၀မိနစ် ၀န်းကျင်လောက်မှာသာ Limit ကို များများတိုးဖို့ ကြိုးစားရင် ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ ဥပမာကို အတိအကျမကောက်ပါနဲ့။ သဘောတရားကို ရယူရင် အလွန်အကျွံ ဒါဏ်ဖြစ်ခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဏ်ဖြစ်အောင် ကာကွယ်ခြင်းကပဲ ပြန်လည်သက်သာအောင် လုပ်ခြင်းရဲ့ ပထမနည်းလမ်းပဲ မဟုတ်လား။
၂။ သွေးပူ သို့မဟုတ် အကြောလျှော့ပါ
အပေါ်ကနည်းမှာ ပထမအခေါက်ဟာ သွေးပူ အခေါက်ပါ။ ဒီအခေါက်ဟာ နောင် အခေါက်တွေမှာ လေးလေးမရင် ဒါဏ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာလေ့ကျင့်ခန်း မဆို အလေးမတော့မယ်ဆိုရင် ပေ့ါပါးတဲ့ အလေးနဲ့ ၁၀ကြိမ်မှ ၁၅ကြိမ်အထိ မပင်မပန်းလုပ်စေချင်ပါတယ်။
အလေးလွတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့လဲ မလုပ်ခင် အကြောလျှော့ စေချင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အကြောလျှော့တယ်ဆိုတာ ၁၀မိနစ် ၁၅မိနစ် အကြာကြီးလုပ်ခိုင်းတာ မဟုတ်ပဲ ၅မိနစ်အောက်ပမာဏ လျှော့ခိုင်းခြင်းပါ။ တောင့်တင်းနေတဲ့ ကြွက်သားတွေ တော်သင့်ရုံ ပြေလျော့သွားရင် လေ့ကျင့်ခန်း စလုပ်နိုင်ပါပြီ။
၃။ Protein မြင့် အစားအစာက အဓိက
၀တာ ပိန်တာ၊ ကျန်းမာရေးကောင်းစေတာ၊ ဆိုးရွားစေတာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဖြစ်စဉ်တော်တော်များများကို ဆုံးဖြတ်ပေးတာ အစားအစာပါပဲ။ ဆီကြော်စာတွေစားမလား၊ ၀လာတာနဲ့ အမျှ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်သလို အရက်သေစာ၊ ကွမ်း၊ ဆေးလိပ် စတာတွေမှီဝဲရင်လဲ မှီဝဲသလောက် သက်ရောက်နိုင်တာမျိုး။ ဆိုလိုချင်တာက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဖြစ်ပျက်မှု အရာအားလုံးနီးပါးလောက်ကို အစားအသောက်က ခိုင်းစေထားတယ်ဆိုတာပါပဲ။
အလေးလွတ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက ကြွက်သားပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစား အမျှင်လေးတွေ ပြတ်တောက်တဲ့ အခါမှာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့၊ အကောင်းအတိုင်း ပြန်ဖြစ်ဖို့ Protein နဲ့ Carbohydrate လိုအပ်ပါတယ်။ Protein က ပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့ အပိုင်းကို အဓိကလုပ်ပေးပြီး Carbohydrate က ပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့ အခါမှာ လိုအပ်တဲ့ ဓါတ်တွေ ကြွက်သားကို ရောက်ဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ စားဖို့လိုသလဲဆိုတာကတော့ အစားအစာ စားတဲ့အခါမှာ အစာကနေ အာဟာရအဖြစ်ခြေဖျက်သွားဖို့ဆိုတာ အချိန်လိုသေးတယ်ဟုတ်။ အစာခြေချိန်ဟာ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူပဲ ကွဲပြားသလို စားတဲ့ ပမာဏအပေါ်မှာလဲ မူတည်ပါသေးတယ်။ ပမာဏများရင် ပိုကြာပြီး ပမာဏနည်းရင်တော့ အစာကြေမြန်တယ် အလွယ်ပြောရမှာပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် ညနေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ့် လူတွေအတွက် နေ့ခင်းစာ ခပ်ကြီးကြီးစားထားရင် ၂နာရီမှ ၃နာရီခွာဖို့လိုသလို မနက်ခင်း စောစော လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူတွေအတွက်တော့ မလုပ်ခင် မိနစ်၃၀ အလိုလောက်မှာ အစာသေးသေး (မိနစ်၃၀ပဲ ခွာမှာဆိုတော့ အစာပမာဏနည်းနည်း) စားရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါမှသာလျှင် လေ့ကျင့်ခန်းအတွက် အားရှိနိုင်သလို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ် စပြီး ပြတ်တောက်လာမယ့် ကြွက်သားမျှင်လေးတွေဆီ အာဟာရလဲ ရောက်နိုင်မယ် မဟုတ်လား။
လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်မီ စားဖို့လိုတာ အရေးကြီးသလို လေ့ကျင့်ခန်းအပြီးမှာ စားတဲ့ အစားဟာ ပိုလို့တောင် အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအချိန်ဟာမှ တကယ်ကြွက်သားတည်ဆောက်တဲ့ အချိန်မလို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချိန်ဟာ ကြွက်သားကြီးထွားချိန်မဟုတ်ပဲ Gym ထဲကအထွက်၊ အလေးတုံးကို ချလိုက်တဲ့ အချိန်ကိုမှ ကြွက်သားကြီးထွားချိန်လို့ Professional Trainer တွေက ဆိုလေ့ရှိကြတာပေါ့။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အပြီးမှာ Protein များများနဲ့ Carbohydrate စားခြင်းဟာ ကြွက်သားတက်ချင်သူတွေအတွက် မလွတ်သင့်တဲ့ အရာတစ်ခုဆိုတာ မမေ့စေချင်ပါ။
ဥပမာ Protein တွေက အသား၊ ငါး၊ ကြက်ဥ၊ နွားနို့၊ Protein powder shake စတာတွေဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ Carbohydrate တွေက ဆန်၊ အားလူး၊ ပန်းဂေါ်ဘီ၊ ပဲပြား၊ ကန်စွန်းဥ၊ ပေါင်မုန့် စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အပြီး စားတဲ့ အစားအစာ မှန်ကန်မှုဟာ အမြန်ဆုံးပြန်လည်သက်သာစေပြီး ရက်တိုတိုတွင်းမှာ ဒဏ်ကင်းပြီး အားအပြည့်နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းထပ် လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုဖြတ်ပြောချင်တာက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အပြီး အစာဆိုတာ လုပ်ပြီးပြီးချင်းအစာ တစ်ပွဲထဲကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးချိန်က စပြီး နောင်တစ်ရက်မှ တစ်ရက်ခွဲအတွင်းစားတဲ့ အစားအစာတွေကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ အပေါ်ကပြောသလို ကောင်းမွန်တဲ့ အစားအစာတွေကို စားရင် ကြွက်သားနာကျင်တာ သက်သာမှု မြန်လား၊ မမြန်လား စမ်းသပ်ကြည့်ရင် သိသာပါလိမ့်မယ် ခင်များ။
၄။ Potassium များများပါတဲ့ အစာစားခြင်း
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အပြီး အစာတွေ အကြောင်းပြောလက်စနဲ့ ဆက်ပြောရရင် Potassium များများပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကိုလဲ ပြင်းထန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းအပြီးမှာ စားဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဥပမာ အစားအစာတွေကတော့ ငှက်ပျောသီး၊ Yogurt ဒိန်ချဉ်၊ ဘိုစားပဲ၊ ငါး၊ ထောပတ်သီး၊ မှို စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ Protein powder တွေမှာလဲ တစ်ဇွန်းကို Potassium 200mg ကျော်ထိပါလေ့ရှိတာမလို့ Protein ရော တစ်ခြားလိုအပ်တဲ့ ဓါတ်တွေပါ တစ်ခါထဲ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အစာတွေကို စားဖို့ တိုက်တွန်းနေပေမယ့် မမေ့စေချင်တာက သင်ဟာ အဆီကျအောင် လုပ်နေရင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကို အကြောင်းပြပြီး အများကြီး စားလို့မရပါဘူး။ သင်အစားများနေသရွေ့ ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းကမှ သင့်ကို အဆီကျစေမှာ မဟုတ်တာ သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါရဲ့၊ အဆီလဲမကျဘူး ငြီးနေသူများ အထူးသတိပြုပါ။
၅။ ရေနွေး ချိုးခြင်း
ရေနွေးနဲ့ ချိုးခြင်းဟာ လေ့ကျင့်ခန်းအပြီး နာကျင်နေတဲ့ ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေသလို ကြွက်သားတက်တာကိုလဲ ပိုစေပါတယ်လို့ သုတေသနတွေက ပြကြပါတယ်။ ကြွက်သားတက်တဲ့ ပမာဏပိုလာတာ သိပ်မသိသာပေမယ့် ရေနွေးနဲ့ ချိုးခြင်းဟာ အမြန်ဆုံး နာကျင်တာ သက်သာစေတယ်ဆိုတာကတော့ ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
၆။ စိတ်ဖိစီးမှု နည်းအောင်နေခြင်း
လေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်တာဟာ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် ဖိအားပေးတာပါပဲ။ လေ့ကျင့်ခန်းကြောင့် ရတဲ့ ဖိစီးမှုဟာ ဖွံ့ထွားဖို့၊ ပိုမိုကောင်းမွန်လာဖို့ လိုအပ်ပေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းအပြီး ဖိစီးခံထားရတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို တခြားဖိအားတွေ ထပ်ပေးတာတော့ မကောင်းပါဘူး။ အလုပ်က ဖိစီးမှု ၊ မိသားစု ဖိစီးမှု ၊ အချစ်ရေး ၊ ငွေးကြေး ဖိစီးမှုတွေကို အများကြီး ခေါင်းထဲမှာ စွဲမြဲမနေစေချင်ပါဘူး။
လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ရင်တောင် ဒီလို ပြင်ပက ဖိစီးမှုတွေဟာ လူတစ်ယောက်ကို ဖျားစေနိုင်၊ အိပ်ရေးပျက်နိုင်၊ ရောဂါရစေနိုင်တာမို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ထားတဲ့ အခါမှာ ဒါတွေကို နည်းစေဖို့က မရှိမဖြစ်လိုပါတယ်။ ဒီတော့ စိတ်ကိုလျှော့ ၊ အပူအပင်မများစေပဲ နေပါက နာကျင်မှုကို အမြန်ဆုံး သက်သာစေမှာပါပဲ။
၇။ အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ခြင်း
ဆောင်းပါးပေါင်းများစွာမှာ အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ဖို့ အရေးကြီးကြောင်းရေးပြီး ပြီမလို့ အရှည်မရေးတော့ပါဘူး။ အိပ်စက်ခြင်းဟာ သဘာသ ဆရာဝန်လို့ ပြောရင်ရပါတယ်။ တော်ရုံ နေလို့မကောင်းရင် အိပ်စက်တာနဲ့တင် သက်သာစေနိုင်တယ်ဟုတ်။
အိပ်စက်ခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တစ်နေ့တာ ပျက်စီးနေသမျှကို ပြုပြင်တဲ့ အချိန်လို့ အလွယ်မှတ်ရင်ရပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စဉ် ဒါဏ်ခံထားရတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်စေချင်တယ်ဆိုရင် ပြင်ဆင်ချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အနည်းဆုံး ၇နာရီမှ ၉နာရီ အိပ်စက်ချိန်ရဖို့ ကြိုးစားပါ။
အပေါ်က အချက်တွေဟာ လေ့ကျင့်ခန်းဒဏ်တွေကို အမြန်ဆုံး ပြန်လည်သက်သာစေပြီး နောက်တစ်ချိန်လုပ်ဖို့ အားအပြည့်ဖြစ်စေမယ့် နည်းတွေပါပဲ။ စမ်းကြည့်ပါ။ လုပ်ကြည့်ပါ။ ဒါမှပဲ ဘာ့ကြောင့် တစ်ချို့လူတွေ မနာမကျင်ပဲ တစ်ပတ်မှာ ၅ရက် (professional အဆင့်ပါ၊ သာမန်လူအတွက်ဆို ၃ရက်မှ ၄ရက် အများဆုံး) ထိလုပ်နိုင်လဲဆိုတာ မြည်းစမ်း သိလာပါလိမ့်မယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းဒဏ်ကနေ ကြွက်သားတွေမြန်မြန် သက်သာလန်းဆန်းလာဖို့ဟာလဲ Gym ထဲမှာသွားဆော့ပြီး ကြွက်သားတွေကို စိန်ခေါ်တာနဲ့ ထပ်တူအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှ တွန်းနိုင် တိုက်နိုင်မယ်၊ Next level လှလာမယ် သန်လာမယ်ဟုတ်။
နောင်တစ်ခေါက် Gym မဆော့မှီ -
ဆော့နေတဲ့ဘော်ဒါတွေကိုလဲ လက်တို့ပြီး ကောင်းကောင်းနား၊ ကောင်းကောင်းသမ နိုင်ကြပါစေဗျား။
မူလတင်ဆက်သည့်စာမျက်နှာ - Golden_Dreams ❤️